Voadika ny 01 Septambra 2018 12:03 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Jolay 2006)
Araka ny voalazan'ny Fitsarana nasionaly misahana ny fifidianana, ny fanisam-bato tamin'ny fifidianana sy ny fitsapa-kevi-bahoaka 2 Jolay no haingana indrindra teo amin'ny tantara. Efa vita ankehitriny ny fananganana ny Antenimieram-panorenana ary manampy amin'ny fanadihadiana sasantsasany amin'ireo valiny i Miguel Centellas ao amin'ny Ciao! ary mihevitra fa ny antoko Unidad Nacional an'i Samuel Doria Medina (UN), izay nirotsaka hofidiana filoha tamin'ny taona 2005 ihany koa no hilalao ny antoko “mpametraka mpanjaka”, izay midika fa ilaina amin'ny fifanarahana rehetra natao ny mahazo ny maro an'isa 2/3 ilaina hanovàna ny lalàm-panorenana. Mampiseho firenena misara-bazana ihany koa ny vokatra satria nifidy ny fizakantena nandritra ny fizotry ny referandaoma ny 4 tamin'ireo departemanta 9. Na dia izany aza, tao amin'ny departemantan'i Santa Cruz, izay nahazoan'ny antoko Movimiento Al Socialismo (MAS) an'ny Filoha Evo Morales seza marobe, maro tamin'ireo mpifidy no mbola nifidy ny fizakantena, izay nifanohitra tamin'ny fomba fijery ofisialin'ny antoko.
Mampiahiahy ihany koa ny fampitoviana ny rehetra fa samy manana ny fomba itondrana azy araka ny mponina sy ny ideolojia ireo faritra manontolo. Leo amin'ny fampitoviana ny rehetra ilay bilaogera izay mitondra ny anarana Joup, monina ao Santa Cruz, ary iray tamin'ireo departemanta 4 nifidy ny fizakantena, ka nanoratra tao amin'ny blaoginy Este Arcoiris se llama Joup (ES).
“Mitarika antsika amin'ny fisarahana ny fampitoviana ny rehetra ary mitondra antsika any amin'ny toerana izay ny mpanota indray no andoavana. Mitombo eo amin'ny vahoaka Boliviana ny onjan-donilony… araka ny efa nolazaiko teo aloha, roa lela ny zana-tsipikan'ny tsy rariny, fanavakavahana ary ny tsy fitoviana. Mety tsy afaka mandefitra manoloana ny kolontsaina hafa ny olona iray, misy koa ny tsy afaka mitsara. Tsy afaka ho anatin'ny vondrona iray mieritreritra fa tsara kokoa na ambony kokoa noho ny hafa ny kolontsaintsika. Firenena marofoko sy marokolontsaina i Bolivia. Fotoana izao hanajana ny kolontsaina sy ny foko misy… Iray ihany i Bolivia. Anisan'i Bolivia i Santa Cruz. Mangataka fanajana isika, saingy tsy maintsy manaja ireo tsy mitovy fomba amam-panao amintsika. “
Ao amin'ny bilaoginy, Palabras Libres (ES) nosoratana avy ao El Alto sy La Paz i Mario Ronald Duran Chuquimia, iray amin'ireo bilaogera vitsivitsy, nanoratra momba an'i Roberto de la Cruz, mpanolo-tsaina an'i El Alto, izay niseho tamin'ny fahitalavitra niaraka tamin'ny vondron'ny tanora indizeny antsoina hoe taliban Boliviana, izay nivoady “hiaro ireo kollas monina any Santa Cruz sy hifanandrina amin'ny Fikambanan'ny Tanora Cruceño”, vondrona iray voampanga ho nanafika ny indizeny tao amin'io tanàna io. Manontany tena i Duran raha hanatsara tokoa ny fiainan'ireo tanora Alteños, izay mijaly noho ny tsy fisian'ny asa sy ny asa ambany ny fanambarana nataon'i de la Cruz. Toa ny fanambarana nataon'ny de la Cruz indrindra no nolazain'i Joup tao amin'ny lahatsorany momba ny fitsarana ny rehetra hitovy amin'ny ankapobeny.
Miahiahy ihany koa ireo bilaogera ao amin'ny pejy Morir Antes Que Esclavos Vivir (ES) amin'ireo olona ireo satria manohy ny fizarazarana eo amin'ny firenena izany, indrindra fa tsy ny mponina tompotany ihany ao Bolivia, fa ahitana mestizos (foko mifangaro) marobe ihany koa. Manontany tena ny amin'ny antony mahatonga ny fampahalalam-baovao Boliviana manome fandaharana mivantana ho an'i de la Cruz ilay mpikambana ao amin'ny kongresy Taloha teo aloha, Dante Pino, izay araka ny filazan'i Pino, koa dia nandray anjara tamin'ny fitarihana ny korontana ara-tsosialy tamin'ny Oktobra 2003. Antsoina hoe PRETÉRITAS (ES) ny bilaoginy.
Farany, sendra zavatra tsara tsy nampoizina ireo bilaogera Boliviana Gustavo Siles ao amin'i Almada de Noche (ES) sy i Isabella Fuente ao amin'i Ergoth (ES), izay samy monina any Espaina, rehefa tonga tany Madrid avy ao Bolivia ny hiran'olon-droa Negro y Blanco. Raha ny marina, nanampy niara-niasa tamin'ny fanatanterahana fampisehoana ho an'ireo mpihira mihitsy i Fuente. Fahombiazana lehibe ny fampisehoana, izay natao tamin'ny 10 Jolay tao amin'ny Foibe Boliviana-Espaniola. Taorian'izay, naneho hevitra mihitsy ny iray tamin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrona fa tsy ho ela dia hanana bilaogy manokana izy ireo.